स्पेनको युरोकप टोली घोषणा, को–को परे टीममा ? | Ratopati
स्पेनको युरोकप टोली घोषणा, को–को परे टीममा ?
personएजेन्सी exploreकाठमाडौं access_timeजेठ ४, २०७६ chat_bubble_outline0
सन् २०२० को युरोकप छनोटका लागि स्पेनले २३ सदस्यीय फुटबल टोलीको घोषणा गरेको छ । शुक्रबार राति घोषणा गरिएको टोलीमा मिडफिल्डर सान्टी काजोर्लाले चार वर्षपछि स्थान बनाएका छन् । उनी यसअघि चोटका कारण बाहिर थिए । स्पेनिस टोलीको गोलरक्षकमा डेभिड डी गिया, केपा अरीजाबलगा र पाउ लोपेज छन् ।
रक्षकमा डानी कार्भाजल, सर्जियो रामोस, मारियो हेर्मोसो, डिएगो लोरेन्टो, मार्टिनेज, जोर्डी अल्बा, सेर्गी रोबर्टो, जोसे गया र जेसस नाभास छन् । मिडफिल्डरमा सेर्जियो बुस्केट, रोड्रिगो हर्नान्डेज, डानी परेजो, इस्को, फावियन रुइज र सान्टी काजोर्ला छन् ।
स्ट्राईकरमा मीकल ओयार्जबल, रोड्रिगो मोरेनो, मार्को एसेन्सियो, इआगो आसपस र अल्भारो मोरटा छन् । युरो कप छनोटमा स्पेन समूह ‘एफ’ मा छ । समूहमा स्पेनसहित, स्वीडेन, नर्वे, रोमानिया, फारोइ आइसल्यान्ड र माल्टा रहेका छन् । स्पेनले छनोटको पहिलो खेल जुन ७ तारिख फारोइ आइसल्याण्डसँग खेल्नेछ ।